बीएमडब्ल्यू जी ३१० जीआर | गृहपृष्ठ
Home यातायात बीएमडब्ल्यू जी ३१० जीआर
on: April 09, 2019 यातायात
सवारीसाधन निर्माता कम्पनी बीएमडब्ल्यूका बाइक नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता टर्क मोटर्स एन्ड ट्रेडिङले गत मङ्सिरमा ल्याएको हो । कम्पनीले नेपालमा विक्री शुरू गर्दा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक गरेको बाइक जी ३१० जीआर हो । यस बाइकलाई जीएससँगै नेपालमा सार्वजनिक गरिएको छ । जर्मन ब्रान्डको बाइक भए पनि भारतीय प्लान्टमा यो बाइक उत्पादन भई नेपालमा आयात हुँदै आएको छ ।
३१३ सीसी डिस्प्लेस्मेन्ट भएको यस बाइकमा सिंगल सिलिन्डरको वाटर कुल्ड चार भल्भ इन्जिनको प्रयोग गरिएको छ । यसले ९,५०० आरपीएममा ३४ बीएचपी अधिकतम पावर र ७५०० आरपीएममा २८ एनएम अधिकतम टर्क उत्पादन गर्छ ।
यस बाइकलाई कम्पनीले आकर्षक लुक्समा निर्माण गरेको छ । सेतो, रातो र कालो गरी तीनओटा रङ भएको बाइकको बडी सार्प र सिल्क रहेको छ । यस बाइकमा सिंगल स्क्रिन राखिएको छ । ११ लिटरको इन्धन ट्यांकी भएको बाइकमा थप १ लिटर रिजर्भ फ्युल क्यापासिटी छ । १६९ केजी तौल भएको बाइकको सिट हाइट ७८५ मिलिमिटर छ ।
बाइकमा टेकोमिटर, स्पीडोमिटर, ओडोमिटर, फ्युल गेज, गियर इन्डिकेटर, एबीएस सिग्नल, कास्ट आल्मुनियम ह्विल, पेन्टागनल विन्ड शिल्डले ढाकिएको डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल लगायत फिचर छन् । अन्य रेगुलर फिचरसँगै यसमा स्मोक्ड ग्लासयुक्त इन्डिकेटर, रिभोलुशन काउन्टर पनि राखिएको छ । बीएमडब्ल्यू जीएसमा फ्ल्याट स्क्रीनसँग एलईडी टेल लाइट पनि जडान गरिएको छ ।
पर्फर्मेन्स तथा ब्रेकिङ सिस्टमका लागि यो बाइक उत्कृष्ट भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । अगाडि ३०० एमएम डिस्क ब्रेक र पछाडि २४० एमएमको सिंगल पिस्टन क्यालिपरसहितको डिस्क ब्रेक भएको बाइकको अधिकतम स्पीड १४३ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ ।
कम्पनीले विक्रीपछिको सेवामा १० हजार किलोमिटरसम्म फ्री सर्भिसिङ र ३ वर्षको वारेन्टी दिएको छ । नेपाली बजारमा सेतो कलरको जी ३१० आरको मूल्य रू. ९ लाख ७५ हजार तथा रातो र कालो कलरको जी ३१० जीआरको मूल्य रू. ९ लाख ५० हजार तोकिएको छ ।
बीएमडब्ल्यूको नाफा ७८ प्रतिशत घट्यो
१ अर्ब यूरो लगानी गर्दै बीएमडब्ल्यू र ड्याम्लर